Ronaldo oo diray fariin xiiso leh kaddib markii uu noqday gooldhaliyaha ugu sareeya horyaalka talyaaniga - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
(Turin) 23 Feb 2021. Cristaino Ronaldo ayaa awooday in uu hoggaamiyo miiska gooldhalinta horyaalka talyaaniga madaama uu dhaliyay labo gool kulankii xalay ay Juventus guusha ka gaartay naadiga Crotone.
Ronaldo ayaa guul ku hoggaamiyay kooxdiisa Juventus ciyaar qeyb ka aheyd horyaalka Talyaaniga oo ay la ciyaareen naadiga Crotone, kaddib markii uu dhaliyay 2 gool, xilli ciyaartan ay ku dhamaatay 3-0.
Cristaino Ronaldo, ayaa fariin soo dhigay bartiisa Instagram-ka kaddib ciyaarta, wuxuuna soo raaciyay sawirka isaga iyo asxaabtiisa, qoraalka ayaa u dhignaa sidan:
“Guul muhiim ah! Waan ku faraxsanahay inaan wax ku darsaday! Aan sii wadno isla sidaan oo kale inaan u socono saaxiibayaal!.”
Kooxda Juventus ayaa ku jirta kaalinta 3-aad ee kala saraynta horyaalka talyaaniga iyaga oo leh 45 dhibcood, waxayna 4 dhibcood ka dambaysaa naadiga Milan, halka 8 dhibcood ay ka hooseeyaan Inter oo ku hoggaamineysa miiska kala sareynta 53 dhibcood, balse Bianconeri waxaa u harsan hal kulan.